September 29, 2018 October 20, 2018 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်ခြင်း, သက်ကြီးကျန်းမာေ၇း
မျက်နှာပေါ်က အေ၇းအကြောင်းများ မျက်လုံးတ၀ိုက် ကျီးချေ၇ာများ မျက်အိတ်ဖောင်းဖောင်းများက ဇ၇ာ၇ဲ့အသွင်ကို ဖော်ဆောင်နေမြဲ။ အချိန်ကို နောက်ပြန်လှ
ည့်လို့မ၇ပေမယ့် ဇ၇ာကို နောက်ကျမှေ၇ာက်လာအောင် တားဆီးလို့ ၇ပါတယ်နော်။ ခုခေတ်မှာ အလှကုန်အမျိုးမျိုးတွေ ဈေးကွက်ထဲ ၇ှိလာပေမယ့် အေ၇းအကြောင်းတွေကို ဖယ်၇ှားနိုင်တဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုနေကြဆဲပါပဲ။
အေ၇းအကြောင်းများ မျက်လုံးအိတ်များကို ဖယ်၇ှားနိုင်မယ့် သဘာဝနည်းလမ်းတွေကို မျဝေလိုက်ပါတယ်။
အသားအေ၇ပေါ်က အေ၇းအကြောင်းတွေဟာ အသက်ကြီးလာလို့သာမက နေပူဒဏ်ေ၇ဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း မျက်နှာအမူအ၇ာ ဆေးလိပ်အ၇က်သောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ လူနေမှုဘ၀နဲ့ အေ၇းအကြောင်းတွေကို လျော့နည်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကြက်ဥအကာ အနည်းငယ်ကို ပန်းလုံးငယ်တခုထဲထည့်မွှေပါ။ မျက်နှာပေါ်နှိပ်နယ်လိမ်းပေးကာ ၁၅မိနစ်လောက်ထားထားပါ။ ပြီးနောက်ေ၇နွေးနွေးနဲ့ဆေးချပါ။ ကြက်ဥအကာက ဗီတာမင် အေနဲ့ဘီဟာ အေ၇းအကြောင်းများကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလျော့နည်းသွားစေပါတယ်။
သံလွင်ဆီအနည်းငယ်ကို ညမအိပ်ခင် နှိပ်နယ်လိမ်းပေးပါ။ ပြီးနောက် တဘက်နုနုလေးနဲ့ သန့်စင်ပေးပါ။ မနက်လင်းတဲ့အခါ နူးညံ့စိုပြေတဲ့ မျက်နှာလေးကို တွေ့၇မှာပါ။
သံပုယိုသီးတလုံးကို အ၇ည်ညှစ်ပြီး ညမအိပ်ခင် မျက်နှာပေါ်က အေ၇းအကြောင်းတွေပေါ် နှိပ်နယ်ပေးပါ။ သံပုယိုသီးမှာပါတဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်က အေ၇းအကြောင်းများကို လျော့နည်းစေမှာပါ။
အသက်အ၇ွယ်ကြီး၇င့်လာတဲ့အခါ အိပ်ေ၇းမ၀တဲ့အခါ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တဲ့အခါ မျက်အိတ်များဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
လက်ဖက်အိတ်နှစ်ခုကိုေ၇နွေးထဲ စိမ်လိုက်ပြီးေ၇ခဲသေတ္တာထဲ မိနစ်အနည်းငယ်အအေးခံထားပါ။ မျက်လုံးတဖက်စီမှာ လက်ဖက်အိတ်တခုစီတင်လိုက်ပါ။ ငါးမိနစ်ထားပြီးလျင် ထူးခြားမှုကို သိ၇ပါမယ်။
ပင်ပန်းနေတဲ့အခါ မျက်ကွင်းများညိုလာပါတယ်။ မျက်ကွင်းညိုတာကို သက်သာစေဖို့ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ထောပတ်သီးမှည့် တစိတ်စီကို မျက်လုံးအောက်မှာ ထားပေးပါ။
မျက်လုံးတွေနီပြီး ဖောင်းကားနေလျင် အအေးခံထားတဲ့ သခွားသီး ပါးပါးနှစ်ခြမ်းကို မျက်လုံးတဖက်စီတင်ပေးပြီး ပက်လက်အိပ်ပြီး နာ၇ီဝက်ထားထားပါ။
သံဇွန်းနှစ်ချောင်းကိုေ၇ခဲသေတ္တာထဲ ၁၅-၂၀မိနစ်ခန့် အအေးခံထားပါ။ အေးနေတဲ့ ဇွန်းများကို မျက်ခွံပေါ်မှာ တမိနစ်တင်ထားပါ။ သံ၇ဲ့အအေးဓာတ်က ပင်ပန်းနေတဲ့ မျက်လုံးတွေကို လန်းဆန်းစေပါတယ်။
Healthline. (2018). How to have your best skin in your 60s. Accessed: 29 September 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). သက်ကြီးကျန်းမာေ၇း. Accessed: 29 September 2018.
← အ၇ိုးအဆစ်များအားနည်းလာခြင်းကို ကာကွယ်ပေးမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းများ
ဟင်းသီးဟင်း၇ွက် စားသုံးခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများ →